ပ(3). Pa-compound . အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး
ကောင်းရှယ် ရတနာရွှေဆိုင် နှင့် မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းအရောင်းဆိုင်
မုံရွာ-ရေဦး ကားလမ်းမကြီး ၊ စိုင်းပြင်ကြီးဈေးအနီး
အမှတ်(၁၁၁/၂) နဝဒေး ဗီလာ ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်
(၃၃)ရပ် ၊ အဝေးပြေးကားဝင်း ၊ အရှေ့ပြင်ရပ်ကွက် ၊ ထားဝယ်
အမှတ်(က-၃) ၊ ပစောက်ကွင်း ၊ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်ပေါက်အနီး ၊ အောင်မင်္ဂလာကားရပ်နားကွင်း ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်
အမှတ်(၂၂၉/၂) ဘူတာရုံလမ်း ၊ (၁)ရပ်ကွက် ၊ လာရှိုး
အမှတ်(၁၀၂) ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ ပိတောက်ရွှေဝါရပ်ကွက် ၊ ကော့သောင်း
၃၅ လမ်း ၊ ၅၆လမ်းဒေါင့် ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၊ မန္တလေး
အမှတ်(၃) မဟာဆွေ(၂)လမ်း ၊ အုတ်ကျင်းဘူတာရုံလမ်း ၊ လှိုင်(၁၃)ရပ်ကွက် ၊ ရန်ကုန်
ဒေဝစ္ဆရာ - ဓာတ်ပုံ နှင့် ဗီဒွီယို ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေး
အမှတ်(၁၁၅) ၊ ၂၇လမ်း ၊ ၇၆လမ်းနှင့်၇၇လမ်းကြား ၊ ဟေမာဇလရပ်ကွက် ၊ ချမ်းအေးသာဇံ မြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့